News 18 Nepal || अभिनेत्री अलंकृताको घरमा लुटपाट, चक्कु देखाएर..
अभिनेत्री अलंकृताको घरमा लुटपाट, चक्कु देखाएर..
एजेन्सी । अभिनेत्री तथा इन्टेरियर डिजाइनर अलंकृता सहायलाई लुटेराको एक समूहले घरमा बन्धक बनाएर नगद लुटेका छन् । उनको चण्डीगढको सेक्टर–२७ को घरमा मंगलबार दिउँसो १२ बजेको समयमा तीन लुटेरा पसेर चक्कु देखाउदै साढे ५ लाख रुपैंयाँ लुटेका हुन् ।
पैसा लुट्नु अघि लुटेराले अभिनेत्रीलाई बन्धक बनाएका थिए । त्यसपछि दुई घण्टा घरमै बसेर सबै पैसा संकलन गरेपछि घरको छतबाट भागेका थिए । लुटेराले उनलाई घरको बाथरुममा बन्धक बनाएका थिए । लुटेराले उनलाई एटीएम र एटीएमको पिन पनि मागेको थियो ।
त्यसपछि एटीएमको माध्यमबाट लुटेराले ५० हजार रुपैंयाँ निकालेका थिए । प्रहरीले लुटेराको खोजी गरिरहेको छ । अलंकृता सन् २०१४ को ‘मिस इण्डिया अर्थ’ विजेता हुन् । उनी सेक्टर २७ मा एक लेफ्टिनेन्ट कर्णेलको घरको दोस्रो तलामा बस्छिन् ।
उनी नयाँदिल्लीमा बस्ने भए पनि एक महिना अघि चण्डीगढमा सरेकी थिइन् । पञ्जाबी म्यूजिक भिडियोमा अभिनयका लागि उनी चण्डीगढ आएकी थिइन् । प्रहरीले उनको कोठाको सिढीमा राखिएको सीसीटीभी फुटेजका आधारमा लुटेराको पहिचान गरेको छ ।
यी पाँच सेलिब्रेटीका नाममा छ गिनीज वल्र्ड बुक रेकर्ड
सामन्था र नागा चैतन्यको सम्बन्ध धरापमा, आखिर किन ?
विवाहको तयारीमा थिए सिद्धार्थ शुक्ला र शहनाज !
एक सातामा अक्षय कुमारको फिल्म ‘बेल बटम’ले कति कमायो ?